प्रचण्डकि छोरी रेनुले १ बर्षमा यस्तो गरिन् काम, हेरौँ एक वर्षे यि हुन् काम ! (विवरणसहित) – www.agnijwala.com
प्रचण्डकि छोरी रेनुले १ बर्षमा यस्तो गरिन् काम, हेरौँ एक वर्षे यि हुन् काम ! (विवरणसहित)
ठीक एक वर्षपहिले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको पदभार गरेपछि रेनु दाहालले भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने महिला तथा वृद्धहरूलाई ओपीडी टिकट निःशुल्क गराउने भनी पहिलो निर्णय गर्नुभयो । त्यो निर्णय यस वर्ष पनि कायम गरिएको छ ।
प्रमुख र उपप्रमुख महिला भएको नेपालकै एकमात्र महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा भरतपुर महानगरले प्राथमिकताका आधा दर्जन क्षेत्रमा विकासका काम अगाडि बढाएको छ ।
‘महानगरपालिकाको बृहद गुरुयोजना निर्माण गरी एकीकृत विकास गर्न विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न गरी महानगरीय गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ’ महानगर प्रमुख रेनु दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘बजारमा अव्यवस्थित अवस्थामा रहेको सवारी पार्किङ्गको व्यवस्थापन गर्न पुलचोक, शहीदचोक र लायन्सचोकमा साथै ट्रक पार्किङ्गको लागि न्यूरोडमा पार्किङ्ग क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।’
महानगर प्रमुख दाहालले सडकपेटीमा व्यवसाय गरिरहेकालाई निरूत्साहित गर्दै बालकुमारी कन्या माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको, सडकबत्ती जडान र व्यवस्थापन गरिएको, एक घर एक बिरुवा कार्यक्रम अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले महानगरभित्र रहेको सार्वजनिक र पर्ती जग्गाहरु खोजबीन गरी संरक्षण गर्ने नीति लिइएको, एक वडा एक पार्क र एक वडा एक पोखरी निर्माणको नीतिलाई अगाडि बढाइएको बताउनु भयो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदी सवारी दुर्घटनाको कारकका रुपमा मुख्य राजमार्गमा समस्या बनेका तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनको व्यवस्थापन, बजार र राजमार्गको मुख्य २० स्थानमा ट्राफिक आइल्याण्ड निर्माण गरिएको, महिलासँग मेयर, समस्यामा रहेका बालबालिका र बृद्धबृद्धासँग मेयर लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेको बताउनु हुन्छ ।
प्राथमिकताका आधा दर्जन क्षेत्र
भरतपुर महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका आधा दर्जन क्षेत्रमध्ये पूर्वाधार विकास पहिलो नम्बरमा रहेको छ । पूर्वाधारतर्फ ९५ कि.मी. रिङ्गरोड र लिंकरोड कामको सुरुवात गरी यसै आर्थिक वर्षबाट १० कि.मी. रिङ्गरोड र ६५ कि.मी. लिंकरोड निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । रिंगरोड र लिंकरोडका अन्य स्थानमा ईआइए र डीपीआर तयार हुँदैछ ।
महानगरका अनुसार, निर्माणाधीन रिङ्गरोड २४ मिटरदेखि ३० मीटर चौडाईको हुनेछ, जसमा ७ मीटर र छ मीटरको दुई लेन, बीचमा, डिभाईडर दुबैतर्फ हरियाली सहितको फुटपाथ र एकपट्टी साइकल ट्रयाक समेत रहने छ ।
गत आर्थिक वर्षमा महानगर जनसहभागिता र अन्य सरकारी निकायहरुको सहकार्यमा करिब ५० कि.मी. बाटो कालोपत्रे भएको महानगर कार्यालयले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरु व्यवस्थित गर्न वडा कार्यालय निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ । २ वटा निर्माण वडा कार्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ भने अन्य ५ वटा वडा कार्यालय निर्माणको प्रकियामा छन् ।
महानगरले ठूला पूर्वाधारहरु निर्माणहरुमा विशेष जोड दिएको छ । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सिटी हल निर्माणको काम अन्तिम प्रक्रियामा छ, जसको लागत करिब एक अर्बको हुनेछ । सरकार, संघ, प्रदेश, महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणको तयारी गरिहेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा देवाघाटमा अत्याधुनिक शवदाह गृह निर्माणको चरणमा रहेको छ । महानगरभित्र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज र सरल बनाउनको लागि २ ठाउँमा आकाशेपुल र ट्राफिक लाईट व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको महानगरले जनाएको छ ।
नारायणगढको लायन्सचोकस्थित तरकारी बजारमा रहेको करिब १० कठ्ठा जग्गामा नगर विकास कोषको सहुलियत ऋणमा बुहतल्ले व्यावसायिक भवन निर्माणको काम यसै वर्षदेखि अगाडि बढाउने तयारी भैरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनु भयो ।
‘पुलचोकदेखि हाकिमचोकसम्म हरियालीसहितको फुटपाथ र सर्भिस ट्रयाक यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आँपटारीमा रहेको महानगरपालिकाको जमिनमा फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छिट्टै सुरु गर्ने लक्ष्य महानगरपालिकाले लिएको छ ।’
सुशासनतर्फ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरी प्रमाणीकरण गरिसकेको महानगर प्रमुख दाहालले बताउनु भयो ।
‘वडा कार्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र पारदर्र्शी बनाउन सबै वडा कार्यालयहरुमा विद्युतीय नेटवर्किङ्गको काम अगाडि बढिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नगरबासीहरुको जनगुनासो सुन्नका लागि टोल फ्री नम्बर र हेल्प डेस्कको स्थापना गरिएको छ ।’
उहाँका अनुसार, स्वास्थ्यतर्फ चितवनलाई मेडिकल सिटीको रुपमा अगाडि बढाउने संघीय सरकारले परिकल्पना गरे अनुसार भरतपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पहल गरिएको छ ।
भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाहालले बताउनु भयो । महानगरभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमन र अनुगमनको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
महानगरले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि आवश्यक नीति निर्माण र नियमन गरिँदै लगेको साथै विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीरण गरी उत्पादकत्व गर्न विषेश कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको, महानगरभित्र रहेका दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई प्रतिलिटर २५ पैसाका दरले प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएका, तरकारी फलफुल, माछा, खाद्यान्न उत्पादनमा लागेको किसानलाई औजार, सिँचाई लगायतमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
पर्यटन विकासतर्फ महानगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती ठाँउहरुमा पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरले जनाएको छ ।
जगतपुरमा अम्रेला भ्यू टावर निर्माणको चरणमा रहेको गोलाघाट र चौकी डाँडामा भ्यू टावर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनु भयो ।
धार्मिक पर्यटनको रुपमा देवघाटलाई विकास गर्ने र पर्यापर्यटकको केन्द्र जगतपुर, मेघैलीलाई बनाउने महागनरले लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ । महानगरले ठूला तारे होटलहरु महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन गर्न चाहनेलाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।
हेरौँ बुदाँगत विवरण
महानगरको पदभार ग्रहण 2074 साउन 22 गते
पहिलो निर्णय भरतपुर अस्पतालका महिला तथा वृद्धहरूलाई ओ.पि.डि.टिकट निःशुल्क र यो निर्णय यस वर्ष पनि कायम गरिएको ।
महानगरपालिकाको वृहद गुरुयोजना निर्माण गरी एकीकृत विकास गर्न विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न गरी महानगरिय गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।
बजारमा अव्यवस्थित रहेको पार्किङ्गको व्यवस्थापन पूलचोक, सहिदचोक र लायन्सचोकमा गरी ३ स्थानमा गरिएको साथै ट्रक पार्किङ्गको लागी न्यूरोडमा पार्किङ्गको व्यवस्था गरिएको ।
सडक पेटीमा व्यवसाय गरिरहेकालाई निरूत्साहित गर्दै बालकुमारी कन्या मा.वि.को जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको ।
सडक बत्ती जडान र व्यवस्थापन गरिएको ।
एक घर एक बिरुवा कार्यक्रम अभियानकै रूपमा अगाडी बढाईएको ।
सवारी दुर्घटना र मुख्य राजमार्गमा समस्याको रूपमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको व्यवस्थापन ।
बजार र राजमार्गको मुख्य 20 वटा स्थानमा ट्राफिक आइसलाण्ड निर्माण गरिएको ।
महिलासँग मेयर, समस्यामा रहेका बालबालिका र बृद्धबृद्धासँग मेयर जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन ।
महानगरभित्र रहेको सार्वजनिक र प्रति जग्गाहरु खोजबिन गरि संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ ।
एक वडा एक पार्क र एक वडा र पोखरी निर्माणको नीतिलाई अगाडी बढाइएको छ ।
95 कि.मी. रिङ्ग रोड र लिंक रोड कामको सुरुवात गरी यसै आ.व.बाट 10 कि.मी. रिङ्ग रोड र ६५ कि.मी. लिङ्करोड निर्माण सुरु अन्य स्थानमा ई आइए र DPR तयार हुँदै । निर्माणाधिन रिङ्ग रोड २४ मीटरदेखि 30 मीटर चौडाईको हुने जसमा7मीटर र5मीटरको दुई लेन बिचमा डिभाईडर दुबै तर्फ हरियाली सहितको फुटपाथ र एकपट्टी साईकल ट्रयाक समेत रहने ।
महानगरले गत आ.व.मा महानगर जनसहभागीता र अन्य सरकारी निकायहरुको सहकार्यमा करिब 50 कि.मी. बाटो कालोपत्रे भएका छन् ।
महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरु व्यवस्थित गर्न वडा कार्यालय २ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेको छन् भने अन्य ५ वटा वडा कार्यालयहरु निर्माणको प्रकियामा छ ।
महानगरले ठूला पूर्वाधारहरु निर्माणहरुमा विशेष जोड दिएको छ । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सिटी हल निर्माणको काम अन्तिम प्रक्रियामा छ जसको लागत करिब एक अर्बको हुनेछ ।
नेपाल सरकार संघ प्रदेश महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणको तयारीमा महानगरपालिका लागिरहेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयनमा देवाघाटमा अत्याधुनिक शवदाह गृह निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
महानगरभित्र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज र सरल बनाउनको लागि २ ठाउँमा आकाशे पुल र ट्राफिक लाईट व्यवस्था गर्ने कार्यमा अगाडी बढिरहेको छ ।
नारायणगढको लायन्स चोकस्थित तरकारी बजारमा रहेको करिब 10 कठ्ठा जग्गामा नगर बिकास कोषको सहुलियत ऋणमा बुहतले व्यवसायिक भवन निर्माणको काम यसै वर्षदेखी अगाडी बढाउने तयारी भैरहेको छ ।
पूलचोक देखी हाकिमचोकसम्म हरियाली सहितको फुटपाथ र सर्भिस ट्रयाक यसै आ.व. मा सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आँपटारीमा रहेको महानगरपालिकाको जमिनमा फोहरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छिट्टै सुरु गर्ने लक्ष्य महानगरपालिकाले लिएको छ ।
महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालनका लागी आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरी प्रमाणिकरण गरिसकेको छ ।
वडा कार्यालयहरुलाई प्रविधीमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै वडा कार्यालयहरुमा विद्युतीय नेटवर्कीङ्गको काम अगाडी बढीरहेको छ ।
नगरबासीहरुको जनगुनासो सुन्नका लागि टोल फ्रि नम्बर र हेल्प डेस्कको स्थापना गरिएको ।
चितवनलाई मेडिकल सिटीको रुपमा अगाडी बढाउने संघिय सरकारले परिकल्पना गरे अनुसार भरतपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पहल गरेको ।
भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।
महानगर भित्र रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमन र अनुगमनको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि आवश्यक निती निर्माण र नियमन गरिदैँ लगेको साथै विषेश छात्रवृत्ती कार्यक्रमहरु अगाडी बढाईएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीरण गरि उत्पादकत्व गर्न विषेश कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको
महानगरभित्र रहेको दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई प्रति लिटर 25 पैसाका दरले प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको ।
तरकारी फलफुल, माछा, खाद्यान्न उत्पादनमा लागेको किसानलाई औजार, सिँचाई लगायतमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको ।
पर्यटन विकास तर्फ
महानगरपालिका भित्र रहेका पर्यटकिय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ति ठाँउहरुमा पूर्वाधार निर्माणको लागी प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ ।
जगतपुरमा अम्रेला भ्यू टावर निर्माणको चरणमा रहेको गोलाघाट र चौकी डाँडामा भ्यू टावर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ ।
धार्मिक पर्यटनको रुपमा देवघाटलाई विकास गर्ने र पर्यापर्यटकको केन्द्र जगतपुर, मेघैलीलाई बनाउने महागनरले लक्ष्य राखेको छ ।
महानगरले ठूला तारे होटलहरु महानगरपालिकाभित्र संचालन गर्न चाहनेलाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।